Corn Kernel ကိုအကောင်းဆုံးရောင်းချခြင်းကိုမချိုးဖောက်ဘဲပြောင်းဖူးမှုန့်စက်
(10 မဲ, ပျမ်းမျှ: 4.50 ထဲက 5)
The ပြောင်းဖူးခြွေလှေ့စက် ပြောင်းနှင့်ရိတ်ပြီးနောက်လယ်ယာနှင့်စက်ရုံများတွင်လူကြိုက်များသည်။ ပြောင်းနိုင်သည့်အရွယ်အစားမှာပြောင်းအရွယ်အစားပြောင်းသည်။,အလေးချိန်ပေါ့,ဒါပေမယ့်ကောင်းသော kernels.the နှင့်အတူသန့်ရှင်း yield.shelling မြင့်မားသောထုတ်လုပ်မှု ပြောင်းဖူးခြွေလှေ့စက် ဒီဇယ်သို့မဟုတ်လျှပ်စစ်မော်တာဖြင့်မောင်းနှင်နိုင်သည်. ၎င်းသည်စျေးကွက်အတွင်းရောင်းအားအကောင်းဆုံးသောတူတူတူရိယာအမျိုးအစားဖြစ်သည်. ပြောင်းဆန်ခြွေလှေ့စက်သည် kernels ကိုမချိုးဘဲစပါးကိုအခွံခွာစေသည်.
ပြောင်းဖူးနယ်လှည့်စက်၏အဓိကတည်ဆောက်ပုံမှာ stander frame ပါရှိသည်,အစာကျွေးပေါက်,roller,အပေါက်ကိုထုတ်ပေးခြင်းနှင့်ဒါ on.when ပြောင်းဖူးစက်ထဲသို့ဝင်သောအခါ,အဆိုပါ roller လှည့်,ပွတ်တိုက်, ပြောင်းဖူးမှပြောင်းဖူးမှအဆန်ကိုဖယ်ရှားရန် Extrusion နှင့် Propulsion,ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ roller ကိုရာဘာနဲ့လုပ်ထားလို့ပဲ, အဆန်မကျိုးရ,ဒီအမျိုးအစားတစ်ခုတည်းခြွေလှေ့စက်ဖြစ်ပါတယ်,သင်ပေါင်းစပ်ချင်ပါသလား ပြောင်းဖူးအခွံခြွေလှေ့ စက်,အရာတစ်ချိန်တည်းမှာအခွံနှင့်ခြစ်နိုင်ပါတယ်.
ပြောင်း / ပြောင်းဖူး
လျှပ်စစ် / ဒီဇယ်အင်ဂျင် / ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်